युगसम्बाद साप्ताहिक - निर्मलाका लागि किन न्याय महंगो ?
Saturday, 01.18.2020, 09:00pm (GMT+5.5) Home Contact
Tuesday, 07.30.2019, 12:41pm (GMT+5.5)
काठमाडौं । अस्ति साउन ११ गते कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको शव भेटिएको दिन । यो एक वर्षमा पन्त बलात्कार र हत्याका विषयमा जति नाटक मञ्चन भयो ती सबै रगमञ्चको पर्दा बन्द भए जसरी बन्द भएका छन् । एक वर्षमा सयौंमाथ अनुसन्धान, ८० जनाको डिएनए परीक्षण गरियो तर हत्यारा को हो पत्तो लागेको छैन । एक वर्षसम्म अपराधी को हो भन्ने पत्तो नलाग्नु विडम्बनाको कुरा हो ।
निमला पन्त बलात्कार र हत्याका सम्बन्धमा सरकारको भनाइ अचम्मैको छ । केही दिन अघि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले “निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या पहिलो हैन, यसपछि पनि हुन्छ सरकार त्यस्तो कार्यलाई पूर्णत निषेध गर्न सक्दैन” भनेर दिएको अभिव्यक्तिका पछाडिको रहस्य बुझ्न कठीन छैन ।
२०७५ साल साउन १० गते साँझ साथी रोशनी बमको घरमा गएकी पन्त साँझसम्म घर नफर्केपछि आमा दुर्गादेवी आत्तिइन, प्रहरीलाई गुहारिन, गाउँलेले पनि प्रहरीलाई खोजी गरिदिन आग्रह गरे । तर प्रहरीले वास्ता गरेन । दुर्गादेवीले प्रहरी चौकीमा राति दुई बजेसम्म बसेर छोरी खोजिदिन अनुनय गरिन् तर प्रहरीले आनाकानी गरिरह्यो ।
११ गते उखुबारीमा उनको शव भेटियो । उनको बलात्कारपछि हत्या भएको निष्कर्ष निकालियो र अनुसन्धान सुरु भयो तर कस्तो अनुसन्धान कस्तो । हत्याको छानबिनका क्रममा प्रहरीले ८० जनाको डिएनए परीक्षण गरियो । कञ्चनपुरका प्रहरी उपरीक्षक दिल्लीराज बिष्टलगायत ८० जनाको डिएनए परीक्षण गरिएको छ । तीमध्ये ७० जनाको डिएनए रिपोर्ट निर्मलाको भेजाइनल स्वाबमा फेला परेको स्पोमको प्रोफाइलसँग मेल खाएन ।
हत्याकाण्डमा शंकाको घेरामा राखिएका ६ सयजना भन्दा बढीलाई प्रहरीले सोधपुछ गरेको छ । प्रहरीले घटनास्थल वरपर र घटना भएका समय कञ्चनपुरमै रहेका, अहिले बाहिर गएकालाई पनि शंकाकै घेरामा राखेको छ । पहिले सोधपुछ भइसकेकालाई पनि पुनः सोधपुछ भइरहेको बताइन्छ । प्रहरीले तीन घरमा खानतलासी समेत गरेको बताएको छ । तर सुइकोसम्म पाइएको छैन । प्रहरीको पहिलो दिनकै व्यवहारबाट असन्तुष्ट स्थानीयले निर्मलाको शव फेला परेको साउन ११ गतेदेखि दोषीलाई पत्ता लगाउन माग गर्दै प्रदर्शन सुरु गरे । प्रहरीले घटनाको अनुसन्धानमा चासो नदिएको बुझेका आफन्तले निर्मलाको शव बुझ्न मानेनन् ।
राजनीतिक दलको उपस्थितिमा प्रहरीले दोषी पत्ता लगाउने लिखित सहमति जनाएपछि चार दिनपछि साउन १४ गते निर्मलाको शव बुझेर आफन्तले दाहसंस्कार गरे । निर्मला हराएको रोशनीको घरबाट अनुसन्धान सुुरु गर्न उनका बुबालगायत आफन्तले गरेको आग्रह प्रहरीले मानेन ।
साउन ११ गतेदेखि सुरु भएर एक साता रोकिएको प्रदर्शन साउनको तेस्रो साताबाट जारी रह्यो । मानसिक सन्तुलन गुमाएका भनिएका भीमदत्त नगरपालिका–१९ धर्मभक्त टोलका दिलिपसिंह बिष्टलाई प्रहरीले बलात्कारपछि हत्या गरेको भनेर भदौ ४ गते सार्वजनिक गरेपछि स्थानीय थप आक्रोशित भए । प्रहरीले निर्मलाका बुवालाई समेत उखुबारीमा लगी दिलिपको कमिजको टुक्रा भन्दै जमिनबाट कपडाको टुक्रा टिपेर देखाए । दिलिपको घरमा नास्पाती किन्ने निहुँमा गएका प्रहरीले दिलिपको कमिजको गोजी च्यातेर उखुबारीमा फालेको भन्दै स्थानीय थप आक्रोशित भए । भदौ ५ गतेदेखि स्थानीय आन्दोलित भए । आन्दोलन चर्कंदै जाँदा भदौ ७ र ८ गते महेन्द्रनगरमा प्रहरीले गोली चलाउँदा एकजनाको मृत्यु भयो, कयौं घाइते भए ।
भदौ ७ गते सरकारले तत्कालीन जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी दिल्ली बिष्ट, डिएसपी ज्ञानबहादुर सेठी र प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमार खड्कालाई फिर्ता बोलाएर नयाँ टिम खटायो । गृह मन्त्रालयले सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको नेतृत्वमा भदौ ७ गते गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले घटनाबारे एक महिना अध्ययन ग¥यो । समितिको प्रतिवेदनमा प्रहरीले प्रमाण नष्ट गरेको, गोली चलाउनुपर्ने अवस्था नहुँदा पनि प्रहरीले गोली चलाएको भन्दै प्रहरीलाई दोषी देखाइयो ।
प्रहरीले एआइजी धिरु बस्न्यातको संयोजकत्वमा प्रमाण नष्ट गर्नुको कारणसहित अध्ययन गर्न विस्तृत छानबिन टोली गठन ग¥यो । उक्त टोलीको प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक दिल्ली बिष्ट र प्रहरी निरीक्षक जगदीश भट्टलाई भविष्यमा अयोग्य नहुने गरी बर्खास्त गरियो भने डिएसपी अंगुर जिसी र ज्ञानबहादुर सेठीलगायत ६ जना प्रहरीलाई निलम्बन गरियो । त्यसपछि प्रमाण नष्ट गरेको भन्दै आठजना प्रहरीविरुद्ध निर्मलाकी आमा दुर्गादेवीले उजुरी हालिन् । दिलिपका दाजु खड्क बिष्टले भाइलाई यातना दिएको भन्दै चारजना प्रहरीविरुद्ध उजुरी दिए । ती सबै धरौटीमा छाडिए ।
यो विषयमा राष्ट्रिय मानवअधिकारा आयोगले गम्भीर चासो दिएको छ । आयोगले अनुसन्धानमा लापरवाही गर्ने प्रहरी र शव पोष्टर्माटममा हेलचेक्र्याई गर्ने चिकित्सकलाई मुलुकी संहिता अनुसार कारबाही गर्न सिफारिश गरेको छ । निर्मला बलात्कार र हत्याको अनुसन्धानमा प्रहरीले चरम नाटक देखाएकै हो । मानसिक सन्तुलन गुमाएकालाई बलात्कारी र हत्या सावित गर्दै सार्वजनिक ग¥यो । अनुसन्धानमा ती गम्भीर लापरवाही र त्रुटी देखिनुका पछाडिको कारणले राजनीतिक रंग पाइरहेको छ । राज्यले नै अपराधी संरक्षण गरेको आरोप लाग्दै यसमा ठूलाबडाकै संलग्नता भएको आरोप धेरैको छ । तैपनि अपराधी पत्ता लागेको छैन । सरकारले दिने जवाफ लाचार छ ।
वर्ष दिनसम्म यो घटनामा जाहेरी समेत दर्ता नभएको अवस्था छ । बलात्कार र हत्यामा अनुसन्धान गर्ने प्रहरी, शव परीक्षण गर्ने चिकित्सकदेखि सबैको चरम लापरवाही र कमजोरी देखिएपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अनुसन्धान अधिकारी तथा चिकित्सकहरुको टोलीले लापरवाही गरेको निश्कर्ष निकाल्दै मुलुकी संहिता लगाउन माग गरको छ ।
आयोगले गत माघमा नै यसबारे सरकारलाई ४ बुँदे सिफारिस र २४ बुँदे निर्देशन बुझाइसकेको छ । आयोगले सिफारिस गर्नुपूर्व नै सरकारले कञ्चनपुरका एसपी डिल्लीराज विष्टसहितका प्रहरीहरुलाई निलम्बन लगायतको विभागीय कारवाही अगाडि बढाइसकेको थियो । तर, निर्मलाको शव परीक्षण गर्ने चिकित्सकहरुमाथि चाहिँ कारवाही वा छानविन भए–नभएको बारे स्वयं आयोग नै अहिलेसम्म बेखबर छ ।
मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनले अगाडि भनेको छ– “शव परीक्षणका क्रममा शरीरमा भएका र फुकाली ल्याइएका कपडाहरुको सूचीसम्म बनाइएको छ, तर हरेक कपडाको विस्तृत व्याख्या भने गरिएको देखिँदैन । कर्तव्य ज्यानजस्तो शंकास्पद मृत्युको शव परीक्षणमा मृतकका कपडाहरुको समेत गहिरो अवलोकन गरी च्यातिएको, घस्रिएको, केही लागेको आदि सबै अभिलेखीकरण गरीदिएमा त्यस्तो सूचनाले मृतकले प्रतिकार गरे, नगरेको अञ्दाज गर्न वा जानकारी पाउन मद्दत हुने हुनाले यी सबै विवरण उल्लेखित भएको पाएइन । यसबाट मृत्युको कारण लगायत निश्कर्षमा पुग्न नसकेको अवस्था छ ।’
आयोगको प्रतिवेदनले निर्मला पन्तको शव परीक्षणमा चिकित्सकबाट लापरवाही भएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ– “शव परीक्षण प्रतिवेदनमा मृत्युको कारण हातले घाँटी अठ्याएर मारेको भनी निक्र्यौल निकालिएको छ । यस्तो निष्कर्षका लागि चाहिने पर्याप्त आधारहरु प्रतिवेदन तथा फोटोहरुमा (३६ वटा तस्वीर) उल्लेख गरिएका छन् । तथापि अन्य थप सम्भावित लक्षणहरुको समेत थप स्पष्टता नभएका कारण २४ घण्टाभित्र मृत्यु भएको भनी दिइएको राय कानूनी चिकित्सा विज्ञानले पुष्टि गरेको पाइएन ।’
निर्मला पन्त हत्यामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै देशव्यापी प्रदर्शन भयो र अहिले पनि भैरहेको छ । राजनीतिक दलका नेतादेखि आम नागरिक सडकमा उत्रिए तर अहिलेसम्म यो विषयले निकास नपाउनु आफैंमा आश्चर्यलाग्दो छ । विज्ञहरु नै भन्न थालेका छन् सरकारले अनुसन्धान गरेर दोषी पत्ता लगाउनै चाहेन । के यस्तै हो त ?
एउटी बालिकामाथिको यो अन्यास न्याय नदिनकै लागि भएको हो । प्रहरीले चाहेको भए सजिलै अपराधी पत्ता लगाउन सक्छ भन्ने विश्वास आमजनतामा अझै पनि छ । निर्मला जस्तै हत्याका घटनामा प्रहरीले २४ घण्टाभित्र हत्यारा पत्ता लगाएको दृश्य देख्नेहरु यो प्रकरणमा प्रहरी किन चुकिरहेको छ र सुरुदेखि नै अपराधी बचाउने गरी अनुसन्धान किन प्रभावित पारियो भन्ने प्रश्नको उत्तर भने कसैसंग छैन ।